अल्ट्रा धावक पण्डितको निधन - Worldnews.com
अल्ट्रा धावक पण्डितको निधन
काठमाडौं, (नेस) अल्ट्रा धावक सञ्जय पण्डितको अमेरिकामा रहेको हिमाल आरोण गर्ने क्रममा निधन भएको छ। अमेरिकाको अलास्कामा रहेको डेनाली हिमाल आरोहण गर्ने क्रममा उनको निधन भएको हो। प्युठान घर भएका पण्डित उक्त हिमाल आरोहण गर्ने क्रममा अल्टिच्युटका कारण मृत्यु भएको बताइएको छ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा आरोहण गरेका पण्डितले विभिन्न देशका ६ हजारभन्दा माथिका ६ वटा हिमालको आरोहण गरिसकेका थिए। गत शुक्रबार निधन भएका पण्डितको शव ल्याउन कठिन भएको अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। अहिले उनको शव ६ हजार १ सय ९० मिटरमा नै रहेको जनाइएको छ। उद्धारकर्ताहरू त्यसतर्फ गएको भए पनि खराब मौसमका कारण उद्धार हुन सकेको छैन। The post अल्ट्रा धावक पण्डितको निधन appeared first on News of Nepal. ...
सगरमाथामा पाइला टेकेको ६४ वर्ष पूरा
दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं ६४ वर्ष अगाडि अर्थात सन् १९५३ मे २९ तारिखका दिन विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको शिखरमा नेपाली नागरिक तेन्जिङ नार्गे शेर्पा र न्यूजील्यान्डका नागरिक...
News of Nepal 2017-05-29
६ सय ३५ जनाद्वारा हिमाल आरोहण
दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं यस वर्षको सिजनमा ६ सय ३५ जनाभन्दा बढी आरोहीले नेपालका विभिन्न हिमालको आरोहण गर्न सफल सफल भएका छन्। पर्यटन विभागका अनुसार सगरमाथा, लोत्से, धौलागिरी,...
मृत भेटिए चर्चित आरोही
काठमाडौं, (नेस) स्वीट्जरल्यान्डका चर्चित पर्वतारोही उली स्टेकको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका क्रममा मृत्यु भएको छ। सगरमाथाको पहिलो आधार शिविर नजिकै हिउँमा चिप्लिएर ४०...
यस वर्ष ३ सय ६ जना सगरमाथाको चुचुरोमा
दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं यस वर्षको सिजनमा हालसम्म ३ सय ६ जनाभन्दा बढी आरोहीले सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेक्न सफल भएका छन्। पर्यटन विभागबाट सगरमाथा आरोहणका लागि यसपटक...
काठमाडौँ, २२ चैत । वसन्त ऋतुको आगमनसँगै सगरमाथालगायत हिमाल आरोहणका लागि नेपालसहित विभिन्न मुलुकका आरोही यतिखेर धमाधम गन्तव्यतर्फ लागिरहेका छन् । हिमालचुली आरोहणका लागि...
धौलागिरी हिमाल आरोहण गर्न गएका ३३ वर्षीय इटालियन नागरिकको मृत्यु
वैशाख १७, काठमाडौ‌ं । धौगालिगरी हिमाल आरोहण गर्न गएका एक इटालियन नागरिकको मृत्यु भएको छ। शेर्पा गाइड एक्सिपिडसनबाट धौलागिरी हिमाल आरोहण गर्न गएका ३३ वर्षीय इटालियन नागरिक...
वैशाख १७, काठमाडौ‌ं । धौगालिगरी हिमाल आरोहण गर्न गएका एक इटालियन नागरिकको मृत्यु भएको छ। शेर्पा गाइड एक्सिपिडसनबाट धौलागिरी हिमाल आरोहण गर्न गएका ३३ वर्षीय इटालियन नागरिक सिमोन ला टेराको आइतबार हिमाल चढ्ने बेलामा मृत्यु भएको हो। उनको आइतबार हेलिकोप्टर उद्दारका लागि गए पनि खराब मौसमका कारण उद्दार गर्न नसकिएको आरोहण दलका एक सदस्य डम्बर पराजुलीले बताए। उनले भने,...
सगरमाथा आरोहण गर्ने यो वर्ष ३ सय भन्दा बढी
शुक्रबार ४० जना भन्दा बढी आरोही टाकुरामा पुगेपछि गत साता यता सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नेको संख्या तीन सय नाघेको अधिकारीहरुले बताएका छन्। अझै करिब डेढ सय आरोहीहरु शिखर नजिक पुग्न लागेको विभागले जनाएको छ। छोटो समयमा थुप्रै आरोहीको शिखरतर्फ आउजाउ भएपछि सो क्षेत्रका केही समय निकै भीड भएर ट्राफिक जामजस्तो अवस्थासमेत आइपरेको अधिकारीहरुले बताएका छन्। ट्राफिक जाम अलिअलि 'ट्राफिक जाम'...
सोलुखुम्बु, ८ जेठ । सगरमाथा आरोहणका क्रममा ५० वर्षीय अमेरिकी नागरिक रोल्याण्ड एयर उडको मृत्यु भएको छ । चिकित्सकसमेत रहेका उनको आइतबार आठ हजार ४०० मिटरको उचाइमा ज्यान गएको प्रहरी नायब उपरीक्षक माधब बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । उनीसँगै यस वर्ष सगरमाथामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या तीन पुगेको छ । यसअघि नेपाली नागरिक मीनबहादुर शेरचनको आधार...
गोरखा , वि.स. २०४३ सालमा गोर्खाको छेकम्पार बुर्जी गाउँ (चुम भ्याली) मा एउटा सामान्य परिवारमा जन्मेकी फुन्जो लामा भोली साझ चार बजे सगरमाथा चढ्दै छिन्। पायोनियर एडभोकेटको व्यबस्थापन तथा पासांग तन्जी शेर्पाको पथप्रदशर्नमा आरोहणको लागि फुन्जो अहिले आधार सिभिरमा छिन्। सबैभन्दा कम समयमा सगरमाथा आरोहण पुरा गरेर नयॉ रेकर्ड राख्ने उनको योजना छ। पुरुषहरुतर्फ यो रेकर्ड भए पनि हालसम्म कुनै...
सोलुखुम्बु, १४ जेठ । सगरमाथा आरोहणका क्रममा हराएका दुई भारतीय नागरिकको शव भेटिएको छ । सगरमाथा आरोहणको पूर्वतयारीका क्रममा चौथो शिविर पुगेका भारतीय नागरिक ५८ वर्षीय परमेशचन्द्र नाथ र ५० वर्षीय गौतम घोष २०७२ चैत ४ गते बेपत्ता भएका थिए । त्यसबेला खोजी गर्दा नभेटएको भएपनि यसवर्ष हिउँ कम हुँदा उनीहरुको शव बाहिर देखिएपछि फेला परेका हुन् । उनीहरुको शव आज हेलिकोप्टरमार्फत राजधानी...